Ny Nosy tokana afaka amin'ny Coronavirus dia hikatona
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Momba ny Nosy Cook » Ny Nosy tokana afaka amin'ny Coronavirus dia hikatona
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Momba ny Nosy Cook • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao • Vaovao • People • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fotoana fohy aorian'ny fipetrahana any Rarotonga dia afaka milomano any amin'ny farihy madio mangarahara ianao, mitsoka amin'ny cocktail anao voalohany na eo amoron-dranomasina miala sasatra ao amin'ny toeram-pialan-tsasatrao mahafinaritra. Na aiza na aiza misy anao na inona no tianao hatao, anao ny nosy hankafy amin'ny fialam-bolinao.
Mazava ho azy fa raha afaka tonga any ianao
The Nosy Cook dia tsy hanokatra ny dia intsony, izay misy ny tsenan'ny fizahantany lehibe any Nouvelle-Zélande mandra-pahatongan'ny tsy nampitan'ny Covid-19 vondrom-piarahamonina nandritra ny 14 andro ary vaksiny feno ny mpandeha 12 mahery
Ny sisin-tanin'i Cook Islands dia nikatona tany Nouvelle-Zélande sy ny ankamaroan'ny firenena hafa nandritra ny telo herinandro mahery taorian'ny nitaterana ny raharaha Delta voalohany tamin'ny 16 Aogositra tao Auckland.
Ny Nosy Cook dia firenena ao amin'ny Pasifika atsimo, misy fifandraisana politika amin'i Nouvelle Zélande. Ny nosy 15 dia miparitaka amin'ny faritra midadasika. Ny nosy lehibe indrindra, Rarotonga, dia misy tendrombohitra mikitoantoana sy Avarua, renivohi-pirenena. Any avaratra, ny Nosy Aitutaki dia manana hadionana midadasika voahodidin'ny haran-dranomasina sy ireo nosy kely feno fasika. Mampalaza ny firenena noho ny toerana maro an-tsokosoko snorkeling sy antsitrika.
Ny governemanta Cook Islands dia nanakatona ny dia lavitra teo noho eo, namela an'i Kiwis any amin'ny Nosy Cook hody ihany.
Nilaza ny praiminisitra Cook Islands Brown fa amin'ny fotoana ho avy dia tsy maintsy miaina miaraka amin'ny Covid-19 ny firenena rehetra. Saingy, tsy izany fotoana izany ho an'ny Cook Islanders, satria manara-maso akaiky ny programa momba ny valan-dra sy ny vaksiny any New Zealand izy ireo.
Ny Nosy Cook dia iray amin'ireo firenena vitsy eto amin'izao tontolo izao izay nahavita nitandrina ny Covid-19 tsy hiditra.
In Ny volana septambra Cook Islands dia nanao toky fa hijanona ho Coronafree.
Hoy i Brown tamin'ny haino aman-jery iray tany Nouvelle Zélande: "Na dia ekentsika aza fa amin'ny fotoana ho avy dia mila mianatra miaina miaraka amin'ny Covid-19 ny firenena rehetra, mbola tsy tonga io fotoana io."
Nasehony mazava tsara fa ny nosy Cook dia tsy te hipoahan'ny COVID. Nampiany hoe, ny fiatraikany amin'ny loharanon-karena ara-pahasalamana an'ny Fanjakana ary koa ny toekarena dia mety hanimba.
Nilaza i Brown fa ny governemantany dia manao izay rehetra azo atao mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny Cook Islanders ary koa ny toekarem-pirenena.
Mponina Cook 300 mahery nogadraina ao Nouvelle-Zélande no tsy maintsy niandry hatramin'ny talata farafaharatsiny mba hahitana raha afaka mody izy ireo.
Nilaza i Brown fa mijery ny sidina fampodiana an-tanindrazana avy any Christchurch ho an'ireo any ivelan'i Auckland amin'ny faritra 2, ny governemantany, saingy mbola tsy nisy daty voatondro.
Ireo mpitsangatsangana ireo dia mila manome fanandramana Covid-19 ratsy 72 ora alohan'ny fiaingany, mameno ny taratasy fangatahana fitakiana fitantanana Cook Islands ary mandalo quarantine tsy maintsy atao mandritra ny hafitoana rehefa tonga ao amin'ny renivohitry ny firenena Rarotonga.
Nilaza i Brown fa noho ny loza ateraky ny Covid-19, ny Cook Islanders ao Auckland dia voatery niandry fidinana tany amin'ny haavo 2 na ambany kokoa alohan'ny namelana azy hisidina sidina mody.
Ny kabinetrany dia hanohy handinika vaovao sy torohevitra vaovao avy amin'ny manampahefana misahana ny fahasalamana rehefa mitombo ny isan'ireo vaksiny any New Zealand.
Ny fiantraikan'ny areti-mandringana amin'ny fizahan-tany amin'ny Nosy Cook sy ny toekareny dia lehibe, ary ny valanaretina tany New Zealand dia nanelingelina ny fitomboana.
Ny famatsiam-bola mitentina 15 tapitrisa dolara dia kasaina hatao hanohanana fanampiny ireo orinasan'i Cook Islands manomboka amin'ny tetibola jona.
Hitohy amin'ny volana septambra ny vola fanampiana karama, ary haverina amin'ny volana oktobra ny vola fanampiana orinasa, ao anatin'izany ny fanomezana mpivarotra tokana.
“Fantatsika fa marefo ny tsenan'ny fizahantany ary toy izany koa ny toekarentsika. Hitanay fa haingana dia haingana ny fizahantany tamin'ny volana Mey, ary mbola hitranga indray izany ”, hoy i Brown tamin'ny tariby vaovao tany Nouvelle Zélande.